Shirkada DPWorld Oo 3500 Qoys oo Gobolka Saaxil ah U Qeybisay Raashin Loogu Talagalay Bisha Barakaysan Ee Ramadaan |
Shirkada DPWorld Oo 3500 Qoys oo Gobolka Saaxil ah U Qeybisay Raashin Loogu Talagalay Bisha Barakaysan Ee Ramadaan
Berbera (GNN)- Shirkada Dekeda Berbera Maamusha ee DP World ayaa deeq raashin ah gaadhsiisay 3500 qoys oo danyar ah ku dhaqan deegano kala duwan oo ka tirsan Gobolka saaxil bisha barakaysan ee Ramadaan.
Raashin qaybinta ayaa socotay maalmihii ugu danbeeyey waxaana laga soo qaybiyey ku dhawaad 15 degmo iyo tuulo oo hoos yimaada Gobolka Saaxil , waxay shirkada oo kaa shaynaysa maamulka Gobolka saaxil ay soo xushay dadka ugu nugu ama ugu jilicsan ee deeeganada raashinka laga qaybiyey.
Qeybinta Raadhinkan oo loo Qeybiyay lana Gaadhsiiyay Xaafadaha kala duwan ee Gudaha Magaalada Berbera gaar ahaana dhamaan xaafadah ee ay ka kooban tahay degmadu .
Madaxda shirkada DP World Supachai Wattanaveerachai oo la dareen ah bulshada Berbera tan iyo wakhtigii ay dalka timi waxaa ka qaybgalay raashin qaybintii xaafada magaalo cada Madaxa shirkada DP World Berbera iyo xafiiska horumarinta bulshada ee shirkada iyo maamulka degmada Berbera .
Madaxa shirkada DP World Berbera ayaa sheegay inuu mar walba diyaar uyahay naf la qaybsiga hurida waxkasta oo bulshadu ubaan tahay , waxaa uu tilmaamay inay shirkada DP World sanad kasta bishan oo kale ay ka farxiso bulshada jilicsan ee Gobolka saaxil iyo deeganadiisa kala duwan .
Waxay madaxda shirkada DP World waxay xuseen inuu raashinkaasi ku filnaan doono bisha barakaysan ee RAMADAAN kaasi oo isugu jira Bariis , daqiiq , sonkor , saliid ,c aano ,timir dhamaystiran oo ah raashin qoys .
Madaxa Xidhiidhka Bulshada Shirkada DP World Mustafe Cabdiraxmaan ayaa isaguna tilmaamay inay raashinkaasi ka qaybiyeen dhamaan deeganada kala duwan waxaa mustafe si gaar ah uxusay dadka qaxootiga ah eek u dhaqan degmada madheera oo ah dad jilicsan inay shirkadu raashin gaadhsiisay qaybana ka ahayeen deeqda bisha barakaysan ee RAMADAAN .
Xogyaha Fulinta dawlada Hoose Cabdiakriin Aadan Cade iyo Madaxa Arimaha Bulshada Dawlada Hoose ee degmada Berbera ayaa iyaguna dhankooda soo dhaweeyey deeqda shirkada DP World Berbera ay ku caawinayso dadka jilicsan waxayna ka markhaati kaceen inuu raashinkaasi si fiican ugaadhay dadkii loogu talogalay ee degmada iyo guu ahaanba Gobolka saaxil .
Gudoomiyaha Gobolka Saaxil Dr Axmed Maxamed Xaashi ayaa ku amaanay shirkada DP World dadaalka iyo tageerada shacabka Somaliland ee adeegyada bulshada gaar ahaana dadka jilicsan waxaa ku amaanay masuuliyada ay iska sareen dadka sooman ee ubaahan tageerada .
Waxay raashinkaasi gabagadii ay gacantooda ku gudoonsiiyeen dadka jilicsan ee ku dhaqan Degmada Berbera gaar ahaana xaafadaha magaalo cad , Burco sheekh , Daaroole iyo degmada Barwaaqo .
Deeganada ay shirkadu raashinka Gaadhsiisay Waxaa kamid ahaa ,Degmada Mandheera , Sheekh Abdaal , Maqaaxida-Inanta , Macaneeye, Waabaha , Xabaalo-Tumaalood,Daragodle , Taagga , Biyo Guure ,Tuulo-Barwaaqo , Geel-lookor iyo Gudaha Magaalada Berbera oo afar xafadood laga qaybiye